ဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘ၀အခြေအနေမို့ မျက်ရည်တွေကူသုတ်ပေးကြပါစို့…! - Thadin
April 17, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘ၀အခြေအနေမို့ မျက်ရည်တွေကူသုတ်ပေးကြပါစို့…!
ရထားရဲတပ်ဖွဲ့ အမှတ်(၁၀)တပ်ခွဲ တောင်ငူရထားရဲစခန်း မှ လ ၁၇၉၆၂၉ ရဲဒုတက ဇော်ဦး….
လည်ချောင်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ အိပ်ယာထဲလဲနေတာ (၃)နှစ်ရှိပါပြီ…ကျနော်တို့ရဲပရဟိတအဖွဲ့က ဆေးကုသစာရိတ်ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တာ (၃) ကြိမ်ရှိပါပြီ…
သားသမီး(၂)ယောက် နဲ့ မျက်စိကွယ်နေတဲ့ မိခင်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးနေတဲ့သူ…အခုသူအိပ်ယာထဲလဲနေချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူက ဘူတာမှာရေရောင်းပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးနဲ့ သူ့ဆေးကုသစာရိတ်ကိုဖြေရှင်းနေရတယ်….
” ဆရာရယ် ကျမလဲအတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထောင့်တာဝန်ကိုထမ်းနေပါတယ် သားသမီးတွေအတွက် မိခင်ကြီးအတွက် အိပ်ယာထဲလဲနေတဲ့ယောက်ျားအတွက် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဆရာရယ် တနေ့လုံးရထားတွေမလွတ်တမ်းရေရောင်းတာတောင် ၂၀၀၀ လောက်ပဲရတယ် သူ့လစာကလဲ ဆေးခွင့်ယူထားတာဆိုတော့ တစ်ဝက်လောက်ပဲရတယ် သူ့ဆေးဖိုးကိုဘယ်လိုမှ မလောက်ငတော့ပါဘူး ကူညီပါဦးဆရာရယ်….”
သားသမီးနှစ်ယောက်အတွက် မိခင်ကောင်းခင်ပွန်းသည်အတွက် အိမ်ရှင်မကောင်းမျက်မမြင်မိခင်ကြီးအတွက် သမီးကောင်း
သူကြိုးစားရုန်းကန်နေရှာတယ် ဒါပေမယ့် ဝန်နဲ့အားနဲ့မမျှလေတော့ ကြိတ်ကြိတ်ငိုနေရတဲ့ နေ့တွေများလွန်းခဲ့ပါပြီ….ကျနော်တို့မကြုံဖူးတဲ့ ဒုက္ခတွေကို သူတို့မိသားစုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်….ကျနော်တို့မကျဖူးတဲ့ မျက်ရည်တွေ သူတို့မျက်ဝန်းမှာအကြိမ်ကြိမ် ကျနေတယ်….
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဒုက္ခကို ကျနော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေက တတ်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမပေးကြရအောင်လား….
သူတို့မိသားစုအတွက် သီးသန့်ကူညီထောက်ပံ့လိုသူများ ကျနော်တို့ရဲပရဟိတအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပေးကြပါလို့ ကျနော်အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ….
ဦးမြတ်သူဟိန်း (ဥက္ကဌ)09-421002737 ….ဦးမျိုးဆွေဦး (အတွင်းရေးမှူး)09-43007061 …ဦးရိုးမ (ဘဏ္ဍာရေးမှူး)09-444486678 ….မထူးထူး (စာရင်းကိုင်)09-400002420
ရထားရဲတပျဖှဲ့ အမှတျ(၁၀)တပျခှဲ တောငျငူရထားရဲစခနျး မှ လ ၁၇၉၆၂၉ ရဲဒုတက ဇျောဦး….
လညျခြောငျးကငျဆာရောဂါနဲ့ အိပျယာထဲလဲနတော (၃)နှဈရှိပါပွီ…ကနြျောတို့ရဲပရဟိတအဖှဲ့က ဆေးကုသစာရိတျကူညီထောကျပံ့ခဲ့တာ (၃) ကွိမျရှိပါပွီ…
သားသမီး(၂)ယောကျ နဲ့ မကျြစိကှယျနတေဲ့ မိခငျကွီးကိုစောငျ့ရှောကျကြှေးမှေးနတေဲ့သူ…အခုသူအိပျယာထဲလဲနခြေိနျမှာ ဇနီးဖွဈသူက ဘူတာမှာရရေောငျးပွီး မိသားစုစားဝတျနရေေးနဲ့ သူ့ဆေးကုသစာရိတျကိုဖွရှေငျးနရေတယျ….
” ဆရာရယျ ကမြလဲအတတျနိုငျဆုံး အိမျထောငျ့တာဝနျကိုထမျးနပေါတယျ သားသမီးတှအေတှကျ မိခငျကွီးအတှကျ အိပျယာထဲလဲနတေဲ့ယောကျြားအတှကျ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ…ဒါပမေယျ့ ဆရာရယျ တနလေုံ့းရထားတှမေလှတျတမျးရရေောငျးတာတောငျ ၂၀ဝ၀ လောကျပဲရတယျ သူ့လစာကလဲ ဆေးခှငျ့ယူထားတာဆိုတော့ တဈဝကျလောကျပဲရတယျ သူ့ဆေးဖိုးကိုဘယျလိုမှ မလောကျငတော့ပါဘူး ကူညီပါဦးဆရာရယျ….”
သားသမီးနှဈယောကျအတှကျ မိခငျကောငျးခငျပှနျးသညျအတှကျ အိမျရှငျမကောငျးမကျြမမွငျမိခငျကွီးအတှကျ သမီးကောငျး
သူကွိုးစားရုနျးကနျနရှောတယျ ဒါပမေယျ့ ဝနျနဲ့အားနဲ့မမြှလတေော့ ကွိတျကွိတျငိုနရေတဲ့ နတှေ့မြေားလှနျးခဲ့ပါပွီ….ကနြျောတို့မကွုံဖူးတဲ့ ဒုက်ခတှကေို သူတို့မိသားစုကွုံတှရေ့ငျဆိုငျနရေတယျ….ကနြျောတို့မကဖြူးတဲ့ မကျြရညျတှေ သူတို့မကျြဝနျးမှာအကွိမျကွိမျ ကနြတေယျ….
ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈယောကျရဲ့ ဒုက်ခကို ကနြျောတို့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမိသားစုတှကေ တတျနိုငျသလောကျ ဝိုငျးဝနျးကူညီဖေးမပေးကွရအောငျလား….
သူတို့မိသားစုအတှကျ သီးသနျ့ကူညီထောကျပံ့လိုသူမြား ကနြျောတို့ရဲပရဟိတအဖှဲ့ကို ဆကျသှယျပေးကွပါလို့ ကနြျောအနနေဲ့ မတ်ေတာရပျခံပါရစေ….
ဦးမွတျသူဟိနျး (ဥက်ကဌ)09-421002737 ….ဦးမြိုးဆှဦေး (အတှငျးရေးမှူး)09-43007061 …ဦးရိုးမ (ဘဏ်ဍာရေးမှူး)09-444486678 ….မထူးထူး (စာရငျးကိုငျ)09-400002420
ယောက်ျားတွေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လမ်းခွဲချင်လာပြီဆိုရင် လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူများ
This Month : 33842
This Year : 175299
Total Users : 534323
Total views : 2417337